DeviceRank: Ego nke Mobile App Wụnye na itinye aka Wayo | Martech Zone
Ndị ụlọ ọrụ na-etinye nnukwu ego na mmepe ngwa mkpanaka. Ebe ọ bụla osisi dị elu, aghụghọ yiri ka ọ na-eso. Dị ka akụkọ ọhụrụ si NgwaọrụRank, Mobile App wụnye na itinye aka aghụghọ ga-efu ndị mgbasa ozi ihe ruru $ 350 nde na 2016
NgwaFlyer's Steeti nke Mobile App Wụnye & Njikọ Aka dabere na teknụzụ DeviceRank company's ụlọ ọrụ ahụ - ihe mgbochi mgbochi aghụghọ nke ụlọ ọrụ ahụ iji chọpụta ma wepu aghụghọ na ọkwa ngwaọrụ - ma kpuchie ngwaọrụ 500.
Budata ihe omumu nke AppsFlyer
Amụma ahụ dabere na ọrụ aghụghọ dị iche iche, ma nke a gosipụtara ma nke a na-enyo enyo:
Mis-inye nke wayo pịa data.
Ntinye ụgwọ maka ngwaọrụ aghụghọ.
Usoro wayo na ihe omume dị na ngwa.
Ntughari anya nke ndi mmadu na ighaghagha.
Gburugburu ala, mba ndị nwere ọnụego kachasị ngwa ngwa na itinye aka na aghụghọ mgbasa ozi, mgbe ha na-azụ ahịa maka ndị na-agagharị agagharị, bụ Germany, Australia, China, Canada na UK, ndị US, Russia na France na-esote. Nnyocha ahụ na-egosi na ndị wayo na-anwa ịba mba ụfọdụ ama dabere na ụgwọ ha ga-enweta site n'ịgha ụgha na ọnọdụ ha iji wayo.
Mba ndị nwere nkwụnye ụgwọ kachasị akwụ ụgwọ na nkwụnye ụgwọ nwere oke aghụghọ, ebe mpaghara ndị nwere obere ụgwọ - gụnyere Indonesia, India, Brazil, Vietnam, na Thailand nwere ọnụ ọgụgụ aghụghọ dị ala.
NgwaọrụRank bụ teknụzụ izizi ngwa ngwa izizi nke ụlọ ọrụ iji chọpụta ma gbochie wayo na ọkwa ngwaọrụ. Nkà na ụzụ a pụrụ iche na-eji ọganihu ọhụụ na nnukwu data na mmụta igwe iji wepụta 3x na 12x nchebe ka mma karịa usoro nhazi ụlọ ọrụ.
Dị ka anyị hụworo n'ọmụmụ ihe ụwa anyị, ndị aghụghọ na ndị aghụghọ na-abawanye ụba, na-aghọgbu ndị mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ maka ntinye na ntinye ngwa. NgwaọrụRank na-ewe usoro dị iche iche dị iche, na-ebipụ aghụghọ na isi mmalite yana na-agbakwunye nghọta na ụlọ ọrụ anyị iji kpuchido ndị mgbasa ozi, ndị mmekọ anyị na ahịa niile. Oren Kaniel, onye nchoputa na onye isi nke AppsFlyer.
NgwaọrụFlyer si NgwaọrụRankTM teknụzụ na-arụ ọrụ n'otu aka ahụ na Ebe E Si Nweta, na-achọpụta omume a na-enyo enyo ma na-enye nchebe zuru oke. Ọ na-agbakwunye algorithm nke nwere nnukwu data-kwadoro algorithm iji wuo anonymously, multidimensional rating of every mobile device.
A na-enyocha ngwaọrụ ọ bụla n'ọtụtụ na C (aghụghọ), site na B, A, AA na AAA. Ngwaọrụ nwere akara “C” na - akpaghị aka site na ngwa AppsFlyer ekewet yana nchịkọta. Ihe edeputara na nmekorita nke ihe ruru ijeri 1.4 na nchekwa data anyi n’ime afọ ise gara aga, na 98% nke ekwentị mkpanaaka niile ekwuputala, DeviceRank nọchitere anya teknụzụ mgbochi aghụghọ zuru oke n’ụwa.
Tụkwasị na nke ahụ, ihe owuwu pụrụ iche nke DeviceRank na mmụta igwe na-enye ohere ka nchekwa data na algọridim na-eto, mụta ma gbanwee ka ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ na-abịa n'ịntanetị, mmekọrịta ọhụrụ na-edepụta yana usoro njikọ aka ndị ọrụ na-agbanwe.
Tags: ngwaNgwaọrụitinye aka na ekwentị mkpanaakaitinye aka na ekwentị mkpanaakaekwentị mkpanaaka na wayongwa mkpanaaka wụnye wayongwa ntinye nke ngwa ngba